Maalinta Dhalinyarada Soomaaliyeed oo Maanta ku beegan & Mas'uuliyiin ka hadlay - Awdinle Online
Maalinta Dhalinyarada Soomaaliyeed oo Maanta ku beegan & Mas’uuliyiin ka hadlay
Maanta waxaa ay ku beegan tahay 15-ka Bisha May waana Maalinta Dhalinyarada Soomaaliyeed ee la Aas’aasay Dhalinyarada SYL , waxaana la filayaa in Magaalada Muqdisho lagu qabto munaasabado lagu xusayo sanadguuradii 78-aad ee kasoo wareegatay Aas’aaskii SYL.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay Munaasabadda Sanadguuradii 78aad ee kasoo wareegatay markii la Aas’aasay Dhalinyaradii Soomaaliyeed ee SYL, kuwaas oo lagu bilaabay 13 Dhalinyaro ah.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgarsiinta ayaa waxaa lagu balan qaaday in Xukuumadda Soomaaliya ay mudnaan gaar ah siineyso Dhalinyarada Soomaaliyeed.
Hoos Ka Akhriso Wra-Saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha
“Dhallinyaradii Soomaaliyeed ee xornimada horseeday waxa ay Soomaali dhaxalsiiyeen taariikh mug weyn oo ifeysa iyo tusaale Soomaalinimo, Gobanimo, Daljaceyl iyo Isku duubni. Waxay kaloo dunida iyo dadka Soomaaliyeedba bareen awoodda dhallinyarada Soomaaliyeed iyo sida ay guulaha uga soo hoyn karaan dhinac walba, markii laga helo daacadnimo iyo isku duubni.
Xornimadii dalka ka hor iyo ka dibba, si weyn ayuu u muuqday doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ee nolosha qeybeheeda kala duwan, siiba difaaca dalka iyo howlaha Qaran ee muhiimka ah.
Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa udub dhexaadka dalkeenna, waxa ayna bulshada ka yihiin in ka badan 70%, taas oo ka dhigan in dalkeennu yahay dal dhallinyaro. Xukuumadda Soomaaliyeed iyadoo garowsan muhiimmadda dhallinyarada Soomaaliyeed, waxay mudnaan gaar ah siineysaa horumarinta dhallinyarada Soomaaliyeed iyo sidii loo xoojin lahaa ka qeybgalkooda dhinacyada kala duwan ee nolosha, si gaar ahna siyaasadda iyo hoggaaminta dalka.
Dhinaca kale Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay Maalinta Dhallinyarada Soomaaliyeed, isaga oo sheegay inay tahay in dhallinyaradu ka mira dhalin karaan dibu dhiska dalkeenna.
“Waxaan bogaadinayaa dhallinyarada Soomaaliyeed xuska munaasabadda sanadguurada 78-aad ee aasaaskii ururkii gobannimo doonka ahaa ee SYL oo maanta ku beegan.
Dhallinyaradu waxay udub dhexaad u ahaayeen xoreynta dalkeenna, walina waa tiirka ay ku taagan tahay dowladnimadeenna, marka la eego sida ay uga muuqdaan Ciidanka Xoogga Dalka, shaqaalaha rayidka ah iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada.
Maadaama ay bulshada maanta ka yihiin 75%, waxaan hubaa in dhallinyaradu ka mira dhalin karaan dibu dhiska dalkeenna.
Previous articleFarmaajo oo dib ugu soo laabtay dalka
Next articleWafdi ka socda DFS oo maanta ka qeyb galaya Caleemo-saarka Madaxweynaha Jabuuti